Kung-fu wisa : Mampitandrina ireo mikasa hamboly korontana -
AccueilRaharaham-pirenenaKung-fu wisa : Mampitandrina ireo mikasa hamboly korontana
17/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitohy hatrany ny fankalazana ny faha-38 taonan’ny kung-fu wisa malagasy. Taorian’i Vakinankaratra sy Bongolava, dia nahazo ny anjarany ihany koa Analamanga. Araka izany, nanatanteraka fihaonambe ny faran’ny herinandro teo tetsy Ampefiloha ny avy amin’ny kung-fu wisa Analamanga, notarihin’ny Maître Avoko Rakotoarijaona. Saika tonga nanotrona izany avokoa ireo mpikatroka, satria dia nahatratra 5 000 izy ireo tamin’izany. Nanome voninahitra izany hetsika izany ihany koa ny lehiben’ny Faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary.
Tamin’izany hetsika fankalazana sady fihaonambe izany,dia nanambara izy ireo fa manohana sy ao ambadiky ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, hatrany ny kung-fu wisa malagasy. Ankoatra ireo asa fampandrosoana efa tontosa sy tanteraka, mbola maro hoy izy ireo no tsy vita sy andalam-panatanterahana, araka ny vina sy ny programan’asan’ny Filohan’ny Repoblika am-perinasa. Noho izany indrindra,dia niray feo ireo mpikatroka kung-fu wisa avy eto Analamanga izay iraisan’izy ireo amin’ireo mpikatroka manerana an’i Madagasikara fa “tsy mila korontana intsony ny vahoaka malagasy ary mila fitoniana”. Araka izany, voalaza fa tsy handefitra amin’ny fanakorontanana ny firenena sy ny saim-bahoaka, toa ny kasain’ireo avy amin’ny antoko politika mpanohitra, Tim sy Mapar, atao sy hotanterahina amin’ny faran’ny herinandro izao ny eo anivon’ny kung-fu wisa.
Notsiahivin’izy ireo nandritra ny fankalazana ihany koa ny tantara nolalovan’ny kung-fu malagasy tao anatin’ny fiainam-pirenena. Nambaran’izy ireo fa niaraka nitolona tamin’ny vahoaka hatrany izy ireo, ary tamin’izany indrindra no namoizan’izy mpikambana maro. Araka izany, notsindrian’izy ireo mafy ny fanohanan’ny kung-fu wisa malagasy ny Filoham-pirenena am-perinasa amin’ny asa fampandrosoana ny firenena. Fa anisany goavana tamin’ny fanambarana ihany koa ny fangatahan’izy ireo ny firotsahan-kofidiana Filoham-pirenen’ ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Raha ny fandaharam-potoam-pankalazana ny faha-38 taona nidiran’ny kung-fu teto Madagasikara indray, dia hitohy any amin’ny Faritra Itasy ny andiany fahefatry ny hetsika, ny 19 mey izao.
Nambaran’i Andry Rajoelina ny alatsinainy 19 novambra tao amin’ny ARENA Ivandry fa « nangalarin’ny kandidà laharana 12 » hono ny vatony. Tokony mbola hanampy ny isan-jato azony, araka ny fiheverany, ilay 8% azon’ny kandidà Hery ...Tohiny